Ongoti bathi akufundiswe abantu ngenkanankana yokuguquguquka kwesimo sezulu ukuhlenga impilo, umnotho nemisebenzi. USLINDILE KHANYILE uyabika - Umbele I SMME Profiles I Labour I Economics I Agriculture I Executive Interviews I Personal Finance News
Usho kanje uMnu uSibusiso Sithole, ungoti wezokwakha e-University of KwaZulu-Natal (e-UKZN), ngesikhathi ephawula ngenselelo yokuhlasela kwezikhukhula okumanje umonakalo ulinganiselwa kuR17 billion KwaZulu-Natali.
USithole uthe imbangela enkulu yezikhukhula wukuthi amanzi awasakwazi ukuzinza phansi, ukungasebenzi kahle kwezitamukoko nokugcwala nokungcola kwemifula.
“Kudingeka sibambisane ngoba singabasusa abantu (abakhe) ngasemfuleni kodwa (sizobayisa kuphi)? Ngakho kufanele sibhekelele inhlalakahle. Kudingeka abezemvelo abazofundisa ngokuthi akulahlwa emfuleni. Kudingeka kunakekelwe imigwaqo nengqalasizinda futhi kufanele siyibhekisise indlela esakhela ngayo abantu izindlu,” kusho yena.
USithole uthe kufanele kungenelelwe nasekulekeleleni labo abazakhelayo izindlu.
Mkhulu umonakalo odalwe yizikhukhulu e-UKZN
“Iningi labantu elizakhelayo alikwazi ukuqasha bonke ongoti abadingekayo uma usuke uzokwakha. Ongoti abafana nabantu abahlola indawo ofuna ukwakha kuyona ukuthi ikulungele yini ukuthi wakhe kuyona. Kufanele sibe nendlela yokubasiza labo bantu,” kusho yena.
Lezi zikhukhula ezibulale abantu abawu-435, kunabawu-55 abasabhekwa, zibhidlize imizi, imigwaqo namabhuloho njengoba namanje kukhona eminye imigwaqo evaliwe. Ichweba laseThekwini alisebenzanga izinsuku ezimbili kanti namanje ayikavulwa yonke imigwaqo engenela nephumela kulona, nokusho ukuthi izimpahla azithutheki kahle.
USithole uthe ukwanda kwesibalo sabantu abasebenzisa imigwaqo yikona okunesandla ekugugeni masinyane kwemigwaqo osekuvamile ukubonakala.
“Imigwaqo yethu yakhiwa kudala futhi yayingakhelwe ukumumatha lo mthamo ewumumathayo. Ayikaze yakhiwe kabusha, kunaloko iyapheshwa nje kuphela. Yinto efanayo nesicathulo… uma ugqoka isicathulo njalo, siyashesha ukuguga.
Yingakho uyaye ubone uma kulungiswa umgwaqo ofana noN3 uthole ukuthi kususwa umzila wonke,” kusho uSithole.
Ngesonto elidlule uMasipala waseThekwini uthe uma amabhizinisi evaliwe idolobha lilahlekelwa wuR28 million ngosuku.
Umkhandlu wengeze ngokuthi isenkulu ingozi yezikhukhula, nokubeka umnotho wedolobha engcupheni ngoba kunamabhizinisi awu-1 152 azinze ezindaweni okulula ukuthi zikhukhuleke.
Uthe kufanele kubhungwe nangokuguquguquka kwesimo sezulu ngoba kunomphumela omkhulu ezikhukhuleni njengoba zehla nangesikhathi okungafanele ngabe liyana ngaso.
UMengameli uCyril Ramaphosa uthe isikali semvula ene eThekwini ngosuku yimvula ebinganela izinsuku eziwu-110.
UDkt uTafadzwa Mabhaudhi, ungoti wokuguquguquka kwesimo sezulu naye ozinze e-UKZN, uthe ukuguquguquka kwesimo sezulu yinto vele ezenzekalelayo kodwa futhi nezinto abantu abazenzayo emhlabeni zinesandla kukona. Uthe kukhona nenkinga yesivuvu sokushisa komhlaba.
“Loku kubonakala ngezindlela ezihlukene ezindaweni ezihlukene njengoba ezinye izindawo ziba nesomiso kakhulu kanti kwezinye lina kakhulu. Isimo sezulu esibi yinto ebike yenzeke kodwa manje esesikubona wukuthi yinto esivama,” kusho yena.
Uthe zikhona izinto ezingenziwa ukunciphisa umonakalo odalwa wukuguquguquka kwesimo sezulu, ikakhulukazi uma kubhekwa nokudla abantu abakudlayo. Nokho uthe loku kuyinselelo e-Afrika.
“Enye yezinto wukuthi sidinga ukuthi abathengi bazi kabanzi ngokudla abakuthengayo nokuthi kukhiqizwa kanjani ngoba loko kuzokwenza banciphise ukuthenga ukudla abaziyo ukuthi kukhiqizwa ngendlela eyona imvelo. Kodwa enye into loko kudla kuyabiza.
“Okokuqala e-Afrika kukhona nenkinga yokuthi abantu abanakho ukudla okwanele ungakafiki nakulezi ezinye izinto. Siyadinga ukunciphisa ukudla inyama yenkomo kodwa lokho kungaba yinselelo ngoba vele abantu abayitholi inyama eyanele. Siyadinga ukwazi ukuthi silima kanjani ngendlela engayilimazi imvelo,” kusho uDkt Mabhaudhi.
Uthe mihle imigomo kahulumeni waseNingizimu Afrika ngokubhekana nale nselelo kodwa uthe kukhona lapho kusala khona uma sekufanele kwenziwe izinto ngoba azixhaswa ngemali eyanele futhi namakhono abantu abangazenza ayashoda.
Usomnotho uSolwazi uBonke Dumisa uthe kusazoba nzima kakhulu ngoba umonakalo awupheleli kuloR17 billion okulinganiswa ngawo.
“Uma ubheka ukuthi ngesikhathi kucekelwa phansi izinhlaka zomnotho ngoJulayi umonakalo kwathiwa uwuR50bn bese wengeza lo R17bn uphinde ubheke nokuthi ngenxa yezikhukhula abantu ababange besavakashela eThekwini ngendlela abebezoza ngayo ngePhasika, nokuphazamisa ezokuvakasha. Bekuvele kuphazamisa ugesi kanti manje sekukhona nenkinga yamanzi,” kusho yena.
URamaphosa uthe ihhovisi loMcwaningimabhuku-Jikelele lizocwaninga ukusetshenziswa kwemali ehlinzekelwe izikhukhula ngaso leso sikhathi ezosetshenziswa ngaso njengoba kwenzeka ngemali yeCOVID-19.
UMcwaningimabhuku-Jikelele uNksz uTsakani Maluleke uthe inhloso yokucwaninga masinyane wukugwema, ukubona nokubika ngabakutholayo ukuze kusheshe kunqandeke lapho kungaputshuka khona, ukukhwabanisa okungenzeka nokumosheka kwemali.
“Kumele sibakhumbuze ababheke ukuphatha kahle imali nokuchaza ukuthi imali isebenze kanjani ukuthi akuyona into esiyiyekayo ngoba naku isimo siyaphuthuma ngisho nanoma ngabe yisibhicongo esinjani. Ukuqapha ngeso lokhozi nokulandela imigomo yokulawula izokwenza umphakathi ube nethemba,” kusho yena.
Okwamanje umNyango wezeziMali uhlinzeke ngoR1bn ukulekelela kanti neSolidarity Fund isazokhipha olunye usizo.